Shirqoolkii Waynaa.!!!! Bilowgii Lumitaanka Qunyar Socodka
Ilaahaybaa mahad leh, naxariis iyo nabad galyana nabiyu laahi mux'ed ayay dushiisa ahaatay. Intaa ka bacdi waxaan dhamaan aqristayaasha ku salaamayaa salaanta islaamka, salaanta ahlul janaha. Asalamu calaikum waraxmatulaahi wa barakatuh.
Iguma aysan ahayn wax kadiso iyo fajiciso ah, waxaanay ahayd falaadh aan filaayay...
Waxay ahayd dhacdo aan ku cusbayn saxwada islaamiga ah, soona noqnoqtay marar badan, intii caqli lehina ay tijaabadaas ka faaiidaysatay...
Hadaba waa in la keenaa xal lagaga hortago fiditanka fikirkaas ah ku qanacsanaanta in islaamku xal yahay. Dhibka iyo guumaysiga umadu ku jirtana in lagaga bixi karo jihaad. Waxay u tafa xayteen oo guntiga dhiisha iskaga dhigeen sidii ay u damin lahaayeen karkaas, Wuxuu yidhi allaah "Waxay doonayaan inay afkooda ku damiyaan nuurka ilaahay".
RAND Corporation waa mid ka mida hay�adaha ugu waawayn maraykanka ee diraasadaha ay soo saarto ay dawlada maraykan ku dhisto hadba wixii ficil ah ee ay qaadayso. Waana hay�ad guun ah oo shaqaynaysay mudo gaadhaysa 60 sano.
Rand ayaa ah xarfo la soo gaabiyay oo ka kooban Research and development, misaaniyad sanadeedkeeda waxaa lagu qiyaasaa lacag gaadhaysa 150 milyan oo dollar, waxaana ka shaqeeya shaqaale gaadhaya 1500 ilaa 1600 oo u badan aqoonyahano shahaadooyin sarsare sita. Waxaanay hay�adani hoos timaadaa ciidanka cirka ee maraykanka US air force.
Hadaba laanta hay�adan u qaabilsan diraasaynta bariga dhexe ee Center for Middle East Public Policy oo ku taala wadanka Qatar gaar ahaan magaalo madaxdiisa doha ayaa waxay dhawaan soo saartay warbixino isdaba jooga oo si khaasa uga hadlaya talooyina uga bixinaya sidii looga hortagi lahaa in jihaadiyiintu ama islaamiyiintu xukunka dawladohooda mar uun gaadhaan iyada oo aanuu maraykan ka raali ahayn ama uusan isagu ka qayb-qaadan arintaas isaga oo ujeedooyin istiraatiijiyadeed oo gaara ka leh.
THE MUSLIM WORLD AFTER 9/11 waa mid ka mida diraasadaha ay diyaarisay Rand taas oo soo baxday March 2005 kana koobanayd 500 oo baal ama xaashiyood, wuxuu hadafkeeda ama ujeedadeeda ugu wayni ahayd sida diraasada lagu sheegay "Istiraatiijiyada ugu haboon ee la gudboon maraykanka in uu kula dhaqmo dunida muslimka ah mustaqbalka"
In islaamiyiinta qunyar socodka ah laga qayb galiyo xukunka dawladohooda ay is hayaan, dhibna ma leh hadii islaamiyiintaasi aanay ku qanacsanayn dimoqraatiyada, waxaanay diraasadu sidoo kale sheegtay baqaha laga qabo in hadii islamiyiinta qunyar-socodka ahi ay si dimoqraadi ah ugula wareegaan xukunka ay ku kacaan falal ka hor imanaya mabaadida dimoqraadiyada oo shareecada islaamku qabto, laakiin waxay diraasadu isku qancisay in hadii ay islaamiyiintu soo gudo galaan hay�adaha dimoqraadiga ah ay suuro-gal tahay in ay aad u furfurmaan aadna ugu dhex milmaan dimoqraadiyiinta, waxaana ay diraasadu shardi uga dhigtay islaamiyiintaas xukunka laga qayb galinayo in ay u hogaansamaan mabaa�dida dimuqraadiyada, iyo in ay ka fogaadaan in ay isticmaalaan xoog ama dagaal (jihad).
In la abuuro lana dhiiri galiyo oo la barbaariyo kooxo islaamiyiin qunyar socod ah, si loogu adeegsado la dagaalanka kuwa ay u yaqaanaan gaaladu ASALRAAC.
In la baabi�iyo lana burburiyo kuwa asal-raaca ah, lana fahmo sifooyinka ay khaaska ku yihiin, siyaalaha ay u wada xidhiidhaan asal-raacyada dunida daafaheeda ku kala nooli, sida ay uwada hawl galaan, cida maal galisa, meelaha ay u liitaan, si markaa ka bacdi loo dejiyo istiraatiijiyada ugu fudud ee loo burburin karo, ka bacdina halkooda lagu badalo kuwa qunyar-socod ah.
In ay ku garaacaan oo ay kula dagaalamaan kuwa ay u yaqaanaan asal raaca ama wahaabiyada sida ay sheegeen, kuwaas oo ay ku tilmaameen in ay yihiin kuwo jihaadiyiin ah ama kuwa fikir ahaan taabacsan alqaeda waa sida ay u dhigeen hadalkee. Kuwaas oo sida ay sheegeen aaminsan in la soo celiyo khilaafadii muslimiinta ee luntay.
In ay ugu cago jugleeyaan kuwa digtaatooriyiinta ah ee xukuma wadamada muslimiinta ah, kuwaas oo ay ku khuukhinayaan in ay xukunka ka tuurayaan kuna badali doonaan kuwaan qunyar socodka ah ee shacbiyada shacabkana haysta, hadii ay xukuumadahaasi fulin waayaan waxa uu maraykan ka dalbado.
Sidoo kale waxaa dhanka kale ee TNG-da arinkaas qiray hadh iyo habeena u taagan ra�iisal wasaare nuur cade.
Akhristayaal aan idin xasuusiyo hadal uu yidhi mid ka mida kuwa ugu rug cadaadisan fikiryahanada ama kuwa dhiga afkaarta siyaasiga ah eeku saabsan bariga dhexe ahna masuul ka tirsan hay�ada rand, isla markaana ah ninka diyaariyay diraasada hore ee The Muslim world after 9/11 kana qayb qaatay diraasadan dambe kaas oo la yidhaahdo angel rabasa isaga oo dhiiri galinaya kuwa lagu sheego qunyar-socodka wuxuu yidhi rabasa:- "Maadaama oo aanu nahay anagu (maraykan) wadan ajanabi ah, oo sidoo kale aanaan ahayn dal muslim ah, nooma suuro galayso in aanu faro-galin ku samayno oo aanu la dagaalano caqiidada ama ideologyada kuwa xagjirka ah� waxaa muslimiinta ku waajiba in muhimadaas iyagu ay ku kacaan, doorka aanu anagu ku yeelanaynaana uu noqdaa uun in aanu idiin diyaarino garoonka cayaarta, anaga oo xoojinayna kuwa qunyarsocodka ah"
Sidoo kale waxaa uu madaxwaynaha TNG-da dambiile c/lahi yusuf axmed ku sheegay waraysi uu siiyay idaacada bbc taariikhdu markay ahayd 16-04-08 oo uu ku sheegay in hada ay haboontahay in la isugu tago oo la faquuqo kuwa uu ku sheegay in ay yihiin argagixisada caalamiga ah, mar la waydiiyay cida uu ula jeedo argagixisada in uu ula jeedo mucaaradka wada hadalka la wadana, waxa uu sheegay in aanuu u jeedin inta aaminsan mabda�a wada hadal in lala galo dawlada ee cida uu u jeedaa ay tahay dhaqdhaqaaqa mujaahidiinta alshabaab oo uu si cad u magcaabay.
Hadaba waxaa kulmadaas lagaga shaqaynaayay in la abuuro jawi uu ku qabsoomo wada hadal ay yeeshaan labada dhinac, taas oo aan loogu danaynayn labada dhinac ee is haya isla markaana wada hadlaya midna laakiin la doonayo in: -
Lagu badbaadiyo laguna samato bixiyo dawlada Ethiopia oo ku guuldaraysatay ujeedooyinkii ay u timid carada Somalia, iyo iyada oo si xawli ah ugu dhiigbaxaysa gudaha dalka Somalia dhaqaale ahaan, iyo millitry ahaanba.
Lagu Burburiyo quwada mujaahidiinta islaamiga ah ee kasoo ifbaxday dalka Somalia, taas oo hor istaagtay hirgalinta mashruuca mucatab ku dirirka caalamiga ah, quwadaas oo islamarkaana fashilisay qorshayaashii isugu jiray damacyada siyaasadeed, dhaqaale iyo militry ee loogu talagalay in dalka Somalia lagu burburiyo laguna qaybsado hantidiisa iyo khayraatkiisa.
Waxaa jira kuwo aan dhaadsanayn qorshahaas oo daacadimo aan sharciga ku banaanayni ay hayso, waxaa jira kuwo dhaadsan laakiin dano siyaasadeed iyo kuwo shaqsiyeed oo mansab iyo kursi u wayn yahay uun u fulinaya qorshahaasi, sidoo kale waxaa jiri kara kuwo ku jira isbahaysiga oon ahayn garabka islaamiyiinta ah oo dhaadsan qorshahaas lagana yaabo in talo ay ku leeyihiin fulinta qorshahaas, ahna kuwa soo xidha fiilooyinka u dhexeeya gaalada iyo isbahaysiga, una diyaarsan qorshaha labaad ee ka dambeeya marka kani uu fulo �illaahay ma fuliyee- ay iyana bilaabaan qorshe meesha lagaga saarayo kuwan qunyar socodka ah laftooda oo ay timaado "waxa la I cunay maalintii dibiga cad la cunay:.
Waxaad tihiin kuwo taariikhda sharfta ku leh bogag dahab ah, waxaad tihiin darbi adag oo hortaagan �insha allaah- mawjadaha damaacinamada ah ee lagu soo weeraray umada muslimiinta ah khaas ahaan umada somaliyeed.
Waad ogtihiin maanta cida ugu badan ee dagaalka ku leedayaa waa shacabka, kaas oo waliba si toos ah loo abaarayo loona beegsanayo, sidaas oo ay tahay ayaa hadana waxaad moodaa in aanuu shacabku ogaynba in aan dagaalka lagu wadin isaga, taasina waa wacyi la�aanta shacabka haysata iyo ogaal la�aanta aanuu ogayn in dagaalkani yahay mid saliibi ah ama mucatab ku dirir ku aadan cid kasta oo islaam ah.
Ka faa�iidaysiga tijaabooyinkii hore.
Hada waxaa mashruucaas hirgalintisu ka bilowmatay dalka ciraq, oo waa la ogyahay sida ay ku bilaabantay mashruuca balaadhan ee ay ka dhalatay fikrada saxawaadka murtadiinta ah. Iyo sida ay awoodii mujaahidiinta ugu wiiqeen gobolada qaar sida anbaar oo kale. Iyo sidaas oo kale mu�aamarada ay mujaahidiinta ku hayaan kuwa sida beenta ah u soo gashaday shaadhka diinta iyaga oo fulinaya mashruuc gaalo soo dhistay, oo ku dhisan wada hadal lala galo dawlada ridada ah ee ciraq ka jirta.
Dhamaan kooxahaasi waa quwad meelo badan oo banaan inaga buuxin kara, waa quwad loobahanyahay in aynu soo jiidashadeeda kooxbadan saarno, oo aan xidhiidhkooda aad u xoojino walow haba ku jiraan kuwa qorshayaashaas khiyaanada wada�ee.
Waa in aynu si guud ugu dignaa kuwa sida indho la�aanta ah ee daacada iyo ikhlaasku ka madhanyahay ugu ololaynaya hirgalinta mashruucaas aadka u khatarta badan iyagoo kaleh dano shakhsiyeed ama hirgalin u kasnimo ah, inagoo isla markaana raacinayna cadayn aynu cadaynayno in aanuu mashruucaasi umada dan u ahayn.
mashruucaasi oo aad se dhaawac gaadhsiisaan mujaahidiinta, taas oo sababi karta in qaar ka mida mujaahidiinta oo dhalinyaro u badani ay si arxandaro ah idiinka aarsan doonaan, idiinlana dagaalami doonaan si ka daran sida ay gaalada ula dagaalamayaan, taasina ay keento in xasuuq sokeeye dhaco - ilaahay ma keenee- dabadeeto aad ku hoobataan maadaama dagaalka aad la idiinka badiyo.
Waa hubaal oo fikirkaa qaldan ee horseeday soo abaabulka shirqoolkaas mujaahidiintu wuxuu ka dhashay isbahaysigii sharci darada ahaa ee lagu soo aasaasay asmara, kaas oo ay ku jiraan kuwo ku caan baxay islaam nacayb, dadnimo xumo, diin la�aan iyo dabadhilifnimo. Wuxuu yidhi rasuulku SCW " qofku wuxuunbuu leeyahay diinta saaxiibkii".
Shalaybay ahayd markuu sheekh shariif �ilaahay hasoo hadeeyee- lahaa nuur cade inuu ka darnaado cali geedi mooyee kama roonaanayo!, tolow maxaa is badalay, sidoo kale shalaybay ahayd markuu lahaa sheekh shariif �alle hasoo hadeeyee- " Hadii dadka qaar ay ka suurowdo in ay wada hadal la sameeyaan dawlada ku meel gaadhka ah anaga nagama suurowdo arintaasi"! tolow maxaa is badalay.
15/04/1429H � 21-04-2008